Mee ngwangwa nke pipụ gị site na Ọgbọ Na-akpaghị Aka | Martech Zone
Ole na ole ụlọ ọrụ nwere ikike ire ịkpọ olileanya ọ bụla dịnụ. Nke ahụ pụtara na a na-ahapụkarị ya ka ohere ma ọ bụ nwee mmetụta nke atụmanya ị ga-eji oge kachasị. Ọtụtụ mgbe, nke a na-eweta ọdachi maka ụlọ ọrụ. Ha na-etinye oge na atụmanya ndị na-agaghị agbanwe mgbe ha nwere ike ịnwe ndu ndị na-ekpo ọkụ ma dị njikere ịzụ ahịa.
Ọgbọ na-arụ ọrụ akpaaka nyiwe na-enye ụzọ dị iche iche ebe a na-ebugharị ndị na-eduga ozugbo ma na-enwetakarị ikike ha imechi. Site na nchekwa data dị ọcha na firmagraphics kwesịrị ekwesị, enwere ike gbanwee nchekwa data ndu n'ime usoro nke na-enyere ndị ahịa na ndị ahịa gị aka ịmata atụmatụ ndị na - arụ ọrụ - site na echiche mkpọsa site na njikarịcha.
iwekota mepụtara ihe omuma a iji gosiputa uzo abuo nke diri ndi ahia ma abia na olile anya ha na uzo ndi ahia:
Okporo Roadzọ Mgbochi dịrị na usoro nhazi ndu aka. Ha na-ebute ọtụtụ adịghị ike na enweghị ike ịlele nloghachi na azụmaahịa azụmaahịa. 50% gaa na 65% nke ahịa furu efu ma ọ bụrụ na onye asọmpi azaghachi tupu ịmee onye ndu
Iduzi Ọgbọ Irè Dị Irè na-eme ka pipre ahịa na-eme ngwa ngwa na-eji usoro ndu ụzọ akpaaka akpaaka nwere ike itinye n'ọrụ site na ọkwa niile nke ịre ahịa: atụmatụ, mbido, mmezu, nyocha na njikarịcha-nloghachi na-abawanye na itinye ego na imepụta ndị ahịa nwere obi ụtọ. Lọ ọrụ ndị na-achịkwa njikwa ndu ha na-ahụ ịrị elu 10% na ego ha nwetara na ọnwa 6-9
Tags: nghazi nduinfographicjikọtana-eduga akpaakaeduNkwado ire ahịa